क्यान्डी क्रश 1532 - क्यान्डी क्रश खेल - नि: शुल्क Lives सुझावहरू धोखा दिन्छ
तिमि यहाँ छौ: घर / वर्गीकृत / क्यान्डी क्रश 1532
Last updated on जुलाई 16, 2021 द्वारा Isobella फ्रान्क्स LeaveaComment
तपाईं आजको संसारमा सफलता कसरी मापन गर्नुहुन्छ? राम्रो, यो एक साधारण घटना हो यदि एक व्यक्ति सफल छ यदि उसले चिन्ता बिना जटिल कार्यहरू पूरा गर्दछ. तपाईं जटिलताहरू भएको अवस्थाको एक धेरै सामना गर्नुपर्नेछ. तपाईं बस आत्मसमर्पण हुनेछ?? यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ, त्यसो भए तपाईले सफलताको मिठो स्वाद लिन सक्नुहुन्न. यो जहाँ क्यान्डी क्रसको खेल तपाईंलाई परीक्षण गर्दछ. यसले तपाईलाई गाह्रो कार्यहरू ल्याउँदछ र तपाईंलाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न सोध्छ.
तपाईं स्वतन्त्र रूपमा सबै कार्यहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्न. यदि तपाइँ गलत मार्गदर्शन मा अडिनुभयो भने तपाइँलाई केहि मार्गदर्शन चाहिन्छ. हामीले सुनेका छौं कि मानिसहरू सामान्यतया अडिग हुन्छन् क्यान्डी क्रश 1532 स्तर. यसैले, यसलाई पार गर्न रणनीतिक चालहरू चाहिन्छ, किनकि यो कडा हो. हामी तपाईंलाई यस सम्बन्धमा सम्बन्धित केही सुझावहरू र युक्तिहरू प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्दछौं क्यान्डी क्रश 1532 स्तर.
प्रत्येक क्यान्डी क्रश स्तरको निर्धारित लक्ष्य हुन्छ. यदि तपाईं त्यो स्तर हराउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले त्यो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ. मा क्यान्डी क्रश 1532 लक्ष्य स collect्कलन गर्नु हो 1 हेजलनेट र 1 चेरी. एउटै समयमा, तपाईंले स .्कलन गर्नुपर्नेछ 75000 पोइन्टहरू. पनि, 20 चाल वा कम ले यो प्राप्त गर्न को लागी लिनु पर्छ. कुल मा छन्5क्यान्डीज र 59 उपलब्ध ठाउँहरू. तपाईले आफ्नो चाल अनुसार योजना बनाउनु पर्छ.
क्यान्डी क्रश 1532 सुझाव र युक्तिहरू
प्रश्न जहिले पनी रहन्छ कसरी एक क्यान्डी क्रस स्तरमा पुग्ने? यदि तपाईंको दृष्टिकोण सुरूबाट सही छैन, तपाईं कुनै समय मा अटक हुनेछ. सुरु गर्न, तपाईंले आफ्नो प्रारम्भिक चालहरूको योजना बनाउनुपर्नेछ र त्यस स्तरलाई पूरा गर्न त्यो अनुरूप कदम चाल्नुहोस्.
सबैभन्दा पहिले, तपाइँले तल्लो दायाँ कुनामा मिलान गरिएको रंगको क्यान्डीहरू ल्याउनु पर्छ. यी मिलान गरिएको रंगको क्यान्डीहरूबाट मुक्त हुनको लागि क्रसर क्यान्डीको तयारी सुरु गर्नुहोस्.
कन्वेयरबाट बाहिर सामग्रीहरू नछाड्नुहोस् किनभने उनीहरू खेलमा फिर्ता आउनेछन्. फलस्वरूप, तपाईंको चाल बर्बाद हुनेछ
जब तपाईं क्यान्डी क्रस गर्न को लागी कोशिश गर्नुहुन्छ, यो उनीहरूको दायाँ सर्छ. हाम्रो सुझाव भनेको सबै प्रकारले एक घटकलाई धकेल्नुको सट्टा विशेष क्यान्डीहरू बनाउने हो. यस स्तरलाई तपाइँले घटक निकास सिर्जना गर्न आवश्यक गर्दछ. यसबाहेक, यस घटकबाट बाहिर निस्कन्छ र टेलिपोर्टरले यसलाई खेलबाट टाढा लैजान्छ.
प्रत्येक कन्वेयर बेल्ट दायाँ पट्टि छ. तथापि, यदि फिर्ता आएको कुनै पनि घटक तल बायाँ प row्क्तिबाट प्रविष्ट गर्दछ. पनि, यदि फिर्ता भयो भने तपाईंको चाल बर्बाद हुनेछ.
यदि तपाईं यी सामग्रीहरू टाढा पठाउनुहुन्छ, तपाईं प्राप्त गर्नुहुनेछ 20,000 पोइन्टहरू. यो लक्ष्यको एक भाग बराबर हो.
यो यो हो कि तपाइँ यस खेलमा पुग्नु पर्छ. यसको लागि उचित योजना चाहिन्छ. यदि तपाईं सुरुमा राम्रोसँग सुरू गर्नुहुन्न भने तपाईं प्लट गुमाउनुपर्नेछ. थप, तपाईको चालहरू खेर गएनन् भनेर निश्चित गर्नुहोस्. प्रत्येक चाल सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नु पर्छ किनकि यो मूल्यवान छ. यदि तपाईं योजना अनुसार अन्तत: अन्ततः तपाईं यस स्तर जित्ने समाप्त हुनेछ. केवल अन्तिम लक्ष्य सम्झनुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं त्यस अनुसार अघि बढ्दै हुनुहुन्छ.